Shuruudaha iyo Xaaladaha - ULLER
AMARKA + 40 € - DIYAARINTA BILAASH AH CAALAMKA
FADLAN AKHRISKA SHURUUDAHA si taxaddar leh
Xaaladahan Guud waxay si cad u xakamayn doonaan cilaaqaadka ka dhasha inta udhaxeysa Indicom Europa 2015 sl (Shirkad leh astaanta Ulller) oo leh xafiiska ka diiwaan gashan Calle Zurbano 41, Bajo wuxuu ka tagay 28010, Madrid iyo CIF ESB87341327 iyo dhinacyo saddexaad (hada kadib, "Users" ") ee iska diiwaangeliya adeegsade ahaan iyo / ama iibsada badeecadaha dukaanka internetka ee bogga rasmiga ah ee Uller (http://www.ullerco.com, ka dib “Bakhaarka”).
2. WAAJIBAADKA ISTICMAALKA
2.1 Isticmaaluhu wuxuu oggol yahay, guud ahaan, inuu adeegsado Bakhaarka, inuu iibsado Badeecadaha iyo inuu u adeegsado mid kasta oo ka mid ah adeegyada Bakhaarka si taxaddar leh, iyadoo la raacayo sharciga, anshaxa, nidaamka guud iyo qodobbada Xaaladaha Guud, waana inaad sidoo kale ka waantowdaa inaad u isticmaasho qaab kasta oo carqaladeyn kara, dhaawici kara ama dhaawici kara howlaha caadiga ah iyo raaxeysiga Bakhaarka ay isticmaalayaashu leeyihiin ama dhaawici kara ama u geysan kara alaabada iyo xuquuqda Uller, alaab-qeybiyeyaasheeda, Isticmaalayaasha ama guud ahaanba qeyb saddexaad.
3. SOO SAARKA IYO QIIMAHA
3.1 Uller waxay xaq u leedahay inay go'aansato, wakhti kasta, Badeecadaha loo soo bandhigo Isticmaalayaasha Bakhaarka. Gaar ahaan, waxaad wakhti kasta ku dari kartaa Badeecooyin cusub kuwa la bixiyo ama lagu daro Bakhaarka, iyada oo la fahamsan yahay in haddii aan si kale loo bixin, Badeecadaha noocan oo kale ah ay maamuli doonaan qodobbada Xaaladahan Guud. Sidoo kale, waxay xaq u leedahay inay joojiso bixinta ama fududeynta marin u helka iyo isticmaalka wakhti kasta iyo iyadoo aan horay loo sii ogeysiinin nooc kasta oo ka mid ah noocyada kala duwan ee Badeecadaha lagu bixiyo Bakhaarka.
3.2 Badeecadaha kujira Bakhaarka waxay uqeexan doonaan sida ugu macquulsan ee suurto galka ah in tignoolajiyada soo bandhigida websaydhku u ogolaado alaabooyinka lasiiyay. Sifooyinka Badeecada iyo qiimahoodu waxay ka muuqdaan Bakhaarka. Qiimaha lagu sheegay Bakhaarka ayaa ku jira Euros mana ku jiraan VAT, haddii kale si kale loo muujiyo.
4. HABRAACA IYO NOOCA BIXINTA SOO SAARKA
4.1 Muddada ugu badan ee afar iyo labaatan (24) saacadood gudahood ah, Uller wuxuu u diri doonaa E-mayl isticmaalaha, isagoo xaqiijinaya iibsashada. Iimaylka ayaa sheegay inuu u xilsaari doono lambarka tixraaca iibsiga, wuxuuna tafaasiil ka bixin doonaa astaamaha sheyga, qiimahiisa, kharashaadka dhoofinta iyo faahfaahinta xulashooyinka kala duwan ee loogu sameeyo bixinta badeecada Ulller.
4.2 Isticmaalaha wax ku iibsanaya badeecada Bakhaarka waa inuu lacag ku bixiyaa nidaamyada lacag bixinta ee si gaar ah ugu faahfaahsan Bakhaarka
4.3 Indicom Europe 2015 sl Waxay keydineysaa dukumiintiyada elektiroonigga ah ee qandaraaska lagu qaabeeyey, iyagoo u diraya nuqul isticmaaleha ah marka la iibsado Qandaraaska waxaa lagu sameyn doonaa luuqada Isbaanishka.
4.4 Xaqiijinta amarka oo ay dirtay Uller Uma ansaxayso qaansheegad ahaan, kaliya waxay caddayn u tahay iibsashada. Qaan-sheegashada u dhiganta waxaa lagu soo diri doonaa Badeecada.
5. XUQUUQDA KA JOOJINTA
5.1 Isticmaaluhu wuxuu xaq u leeyahay ka bixitaan uu kula soo xiriiri karo Uller iimayl ahaan cinwaanka soo socda: la xiriir @ ullerco.com kana noqo iibsiga muddo aan ka badnayn toddobo (7) maalmood oo shaqo, lagu tiriyo helitaanka Badeecada. Badeecada waa in loo wada diraa xaashida soo celinta ee sida saxda ah loo dhammeystiray iyo nuqul ka mid ah qoraalka gudbinta ama qaansheegta, oo si habboon loo dhammaystiray, kharashka tooska ah ee soo celinta alaabta uu qaadayo Isticmaalaha-iibsadaha. Soo celinta la sheegay waxaa lagu sameyn doonaa iyadoo la raacayo tilmaamaha uu Ulller u tilmaamayo Isticmaalaha iyadoo laga jawaabayo ogeysiiskiisa layliga ka bixitaanka. Isticmaaluhu waa inuu ku soo celiyaa badeecada ugu badnaan toddobo (7) maalmood ka dib markii Ulller uu muujiyo qaabka soo celinta.
5.2 Bixitaanku wuxuu keenayaa soo celinta qaddarka la bixiyay. Si tan loo sameeyo, macaamilku waa inuu ku muujiyaa warqadda soo celinta lambarka iyo qofka haysta kaarka deynta ee loo dirayo Uller Waa inaad bixisaa lacagta. Erayga bixinta lacag bixinta wuxuu ku dhisnaan doonaa sharciga.
5.3 Xaqa ka-noqoshada lama isticmaali karo marka alaabta aan lagu soo celin baakadeedkeedii hore iyo marka alaabtu aysan ku jirin xaalad kaamil ah.
6. ADEEGGA Macaamiil
6.1 Dhacdo kasta, sheegasho ama ku dhaqanka xuquuqdooda, Isticmaaluhu wuxuu u diri karaa emayl cinwaanka cinwaanka @ Uller.com.
7. ADEEGGA GEYSIGA GURIGA
7.1 Baaxadda dhul ahaaneed ee iibka ee loo marayo Bakhaarka ayaa gaar u ah dhulka Midowga Yurub, sidaas darteed adeegga gudbinta wuxuu u noqon doonaa oo keliya dhulkaas. Badeecadaha laga soo iibsaday Bakhaarka waxaa loo diri doonaa cinwaanka geynta ee uu muujiyey Isticmaaluhu marka bixinta la caddeeyo, muddada ugu badan ee la keenayaa waa soddon (30) maalmood oo aasaas ahaan loogu sameeyey Sharciga.
7.2 Adeegga gaarsiinta ee Uller Waxaa lagu fuliyaa iyada oo lala kaashanayo hawlwadeennada saadka ee kaladuwan ee sharafta la aqoonsan yahay. Amarada looma adeegsan doono sanduuqa PO ama hoteelada ama cinwaanno kale oo aan joogto ahayn.
7.3 Qiimaha rarka kuma darin qiimaha badeecada. Waqtiga la iibsanayo Badeecada, Isticmaaluhu waxaa lagu wargalin doonaa qiimaha dhoofinta saxda ah.
8. HANTI DHAQAALO IYO GANACSIGA
8.1 Isticmaaluhu wuxuu qirayaa in dhammaan walxaha Dukaanka iyo mid kasta oo ka mid ah Badeecadaha, macluumaadka iyo agabyada ku jira, noocyada, qaab-dhismeedka, xulashada, habeynta iyo soo bandhigidda waxyaabaha ay ka kooban yihiin, iyo barnaamijyada kombiyuutarka ee lagu isticmaalay xiriirka iyaga, waxaa ilaaliya xuquuqda aqooneed iyo tan warshadaha ee Uller ama dhinac saddexaad, iyo in Shuruudaha Guud aaney ku xirnayn iyada oo laxiriirta sida lagu yiri xuquuqda warshadaha iyo xuquuqda hantida aqooneed xuquuq kasta oo aan ka aheyn kuwa si gaar ah looga fikirey isla.
8.2 Haddii aanu fasax ka helin Uller ama sida kiisku u noqon karo qofka saddexaad ee haysta xuquuqda la midka ah, ama in tan la oggol yahay mooyee, Adeeggu ma soo saari karo, ma beddeli karo, ma beddeli karo, kala diri karo, injineer beddela, qaybin karo, kiraysan karo, amaahan karo, ma heli karo, ama ma oggolaanayo helitaanka dadweynaha iyada oo loo marayo nooc kasta oo isgaarsiin dadweyne oo ka mid ah walxaha lagu tilmaamo sadarka hore. Adeegsaduhu waa inuu u adeegsadaa agabka, waxyaabaha iyo macluumaadka uu ka helo isticmaalka Bakhaarka keliya baahiyadiisa, oo ku qasbay inuusan fulin, si toos ah ama si aan toos ahayn, uga faa'ideysiga ganacsi ee agabka, waxyaabaha iyo macluumaadka laga helay. isku mid ah.
8.3 Isticmaaluhu waa inuu iska ilaaliyaa inuu dhuumaaleysto ama maroorsado aaladaha farsamada ee ay aasaaseen Uller ama qaybaha saddexaad ee Dukaanka.
9. ILAALINTA MACLUUMAADKA
9.1 Iyadoo la raacayo Sharciga 15/99 LOPD, waxaan kugu wargalineynaa in macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed iyo macluumaadka kale ee lagu bixiyo foomka diiwaangelinta, iyo sidoo kale in laga helo macaamillada la fuliyay, lagu dari doono laguna keydin doono feyl lagu shaqeynayo, oo ay leedahay Uller, ilaa iyo inta burintaada aan la codsan. Daaweyntu waxay ku xirnaan doontaa horumarinta iyo fulinta iibinta, fiirsashada shakhsiyadeed ee badeecooyinka iyo adeegyada ay hesho iyo hagaajinta feejignaanta la sheegay, iyo sidoo kale kor u qaadista alaabada iyo adeegyada u gaarka ah iyo shirkadaha saddexaad ee la xiriira Ulller.
Sidoo kale, waxaa lagugu wargaliyay in xogtaada loo diyaarin doono shirkadaha la xiriira ujeedooyinka la tilmaamay. Uller Waxay ula dhaqmi doontaa xogtan si xafidan qarsoodinimada, iyada oo ah cida keliya ee heleysa iyaga, iyo samaynta meelaynta ama isgaadhsiinta qaybaha saddexaad oo aan ahayn kuwa ku cad xeerarka hadda jira.
Adeeggu wuxuu si cad u oggolaanayaa gudbinta, xitaa iyadoo loo marayo qaab elektiroonig ah, Uller iyo hay'adaha aan soo sheegnay, isgaarsiinta ganacsiga iyo dalabyada xayeysiinta iyo tartamada. □ haa, waan aqbalay
9.2 Isticmaaluhu wuxuu adeegsan karaa xuquuqda helitaanka, toosinta, diidmada ama ka noqoshada wakhti kasta isagoo la xiriiraya Uller, emayl ahaan loo soo diray si loola soo xiriiro @ Uller.com, ku lifaaqaya nuqul ka mid ah NIF-gaaga ama dukumintiga aqoonsiga ee lagu beddelayo.
9.3. Jawaabaha lagu calaamadeeyay * foomka diiwaangelintu waa qasab. Jawaabtaada ayaa ka hortegi doonta iibsashada waxyaabaha la xushay in la sameeyo.
10.1 Uller Waxay u fududeyn doontaa adeegsiga furayaasha ereyga shakhsi ahaaneed ee isticmaaleha diiwaangeliya sida shabakadda. Furaha sirta ah ayaa loo adeegsan doonaa si marin loogu helo adeegyada lagu bixiyo Websaydhka. Adeegsaduhu waa inuu ku xafidaa furaha sirta ah mas'uuliyadiisa keli ah ee sirta ugu adag uguna sarreysa, iyada oo loo maleynayo, inta waxyeelo ama cawaaqib nooc kasta ah ee ka timaadda jebinta ama bixinta sirta. Sababo amni awgood, furaha sirta ah ee marin u helka adeegyada ku xiran Websaydhka waxaa laga beddeli karaa wakhti kasta oo uu adeegsaduhu adeegsado. Isticmaalaha ayaa oggolaaday inuu si dhakhso leh ugu wargaliyo Ulller adeegsi kasta oo aan loo fasaxin isticmaalkiisa sirta ah, iyo sidoo kale marin u helista dhinac saddexaad oo aan fasax u lahayn.
11.1 Uller isticmaalaa cookies si loo hagaajiyo adeegyadeeda, loo fududeeyo duulimaadka, loo habeeyo amniga, loo hubiyo aqoonsiga Adeegga, loo fududeeyo marin u helista doorbidyada shaqsiyadeed iyo la socoshada adeegsiga Bakhaarka. Kukiyada waa faylal lagu rakibay kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka ama xusuusta biraawsarka ee galki uu horay uqoray nidaamka hawlgalka kumbuyuutar ee Adeeggu inuu ku garto.
11.2 Haddii Isticmaaluhu uusan rabin cookie in lagu rakibo dirawalkooda adag, waa inuu u qaabeeyaa barnaamijkooda daalacashada internetka si uusan u helin. Sidoo kale, Isticmaaluhu wuxuu si xor ah u burburin karaa buskudka. Haddii ay dhacdo in Isticmaaluhu uu go'aansado inuu joojiyo cookies-ka, tayada iyo xawaaraha adeegga wuu yaraan karaa, xitaa, waxay waayi doonaan marin u helidda qaar ka mid ah adeegyada lagu bixiyo Bakhaarka.
12. SHARCI KU HABSAN IYO XUKUN
Shuruudahan guud waxaa xukuma sharciga Isbaanishka. Wixii khilaaf ah ee ka yimaadda tarjumaadda ama fulin ka dhalan kara laxiriirta ansaxnimada, tarjumaadda, dhammaystirka ama xallinta qandaraaskan waxaa loo gudbin doonaa Awoodda iyo Tartannada Maxkamadaha iyo Maxkamadaha Magaalada Madrid, iyagoo dhaafaya wixii awood sharci ah ee la jaan qaadi kara. Adeegsiga, waxaa la siinayaa in sharciga ku habboon uu oggolaado.
© 2021 Uller. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh